Dowlada oo todobaadkan qeybin doonto lacag dhan 2.5 bilyan oo lagula tacaalayo macluusha – The Voice of Northeastern Kenya
Dowlada oo todobaadkan qeybin doonto lacag dhan 2.5 bilyan oo lagula tacaalayo macluusha
Star FM December 19, 2016
Maalmo ka dib markii qaramada midoobay ay ka digtay abaar saameyn karto dalka ayay dowlada shaaca ka qaaday in todobaadkan gudihiisa la soo saarayo lacag dhan 2.5 bilyan oo shilin oo lagula tacaalayo gaajada.
Wasiirka wasaarada dowlad wadaajinta iyo qorsheynta qaran Mwangi Kiunjuri ayaa xusay in lacagtan ay qeyb ka tahay 5 bilyan oo shilin oo miisaniyad sanadeedkan loogu qoondeyay in lagu maareeya musibooyinka.
Mr Kiunjuri ayaa hadalkan jeediyay isaga oo ka jawaabayay digniinta qaramada midoobay halka uu ka dhawjiyay in maamulka qaran ee maareya musiibooyinka ee loo soo gaabiyo NDMA u wasaarada si joogta ah ula socodsiinayay xaalaad sida ay tahay sidaas awgeedna uu dalka si weyn ugu diyaar garoobay xakameynta gaajada ka dhalan karto abaaaraha.
Maalintii Talaadada ayey hayd markii qaramada midoobay ay dowlada Kenya u soo jeedisay in ay isu diyaariso abaara ay suurta gal tahay in sanadka soo socdo ay hadalka ka dhac do oo ayna sii xumaato.
Hay’ada qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha cunada iyo beeraha ee FAO ayaa sheegtay in noolosha shacabka iyo xoolaha dalka ay halis ku jiraan maadama anan weli si buuxda looga soo kabanin abaartii sanadii 2014-kii.
← 5 qof oo ka mid ah dadka soo codsaday jagada guddomiyaha IEBC oo maanta turxaan bixin lagu sameynayo
3 qof oo ku dhimatay countiga Bomet halka 200 oo kalena cisbitaal la dhigay kadib markii ay cuno la sumeeyay cuneen →